Top 5 undelete Ngwaọrụ n'ihi na Windows / Mac
1.2 Hichapụ Kuki s
CD Iweghachite toolbox
N'ihi na UndeleteMyFiles
Ọ dịghị ihe ọzọ na-akụda mmụọ karịa adịkwa gị faịlụ, foto, na ọzọ data, ma ọ bụ gị kpatara ma ọ bụ onye ọzọ. Luckily, e nwere ọtụtụ ngwaọrụ n'oge na-enyere gị aka naghachi gị furu efu na-ehichapụ faịlụ. Ụfọdụ n'ime ha nwere ike ọbụna ịrụzi ụfọdụ mebiri emebi faịlụ. Ọtụtụ n'ime ndị a ngwá ọrụ ike naghachi gị faịlụ ekele ka ụzọ ahụ Windows na Mac igwe aka gị data.
Niile nke gị faịlụ na-dere na diski ike gị. Ha na-nọ n'ebe ahụ ruo mgbe ị na-ekpebi tufuo ha, ma ọ bụ ruo mgbe ị mmadụ na mberede tufuo ha. Ozugbo i kpọrọ gị faịlụ dị ka ehichapụ Windows / Mac adịghị n'ezie ihichapụ faịlụ kpamkpam. Kama nke ahụ, ohere nke faịlụ ama ji na kpọrọ maka iwerekwa.
Kasị faịlụ mgbake ngwaọrụ ịdabere na eziokwu na faịlụ na-adịghị ahụ ehichapụ, ma, nanị flagged dị ka ehichapụ. Ndị okenye ndị faịlụ, ike ọ bụ na-agbake bụ n'ihi na e a elu puru na faịlụ a overwritten. Ọ bụ ya mere i kwesịrị iji undelete ngwaọrụ ka anya dị ka faịlụ na-ehichapụ.
Undelete ngwaọrụ na-arụ ọrụ ndị kasị mma mgbe ị naghachi-ehichapụ faịlụ ọzọ mbanye. Nke ahụ bụ n'ihi mgbake dabeere rewriting faịlụ ka mbanye; ị na-achọghị dee n'elu ndị ọzọ faịlụ na ike-gbakee. Ọzọ mbanye nwere ike ịbụ ihe ọzọ na diski ike, USB, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ mpụga USB ngwaọrụ.
Ọzọkwa, ọ bụ incredibly ike naghachi faịlụ site na mebiri emebi mbanye site na iji ọtụtụ ndị mgbake ngwaọrụ, karịsịa free n'anya. Oké ọnụ ngwaọrụ nwere ike na-agbali naanị ele mmadụ anya n'ihu mgbake, ma Ohere N'ihi na a zuru mgbake dị nnọọ ala. Ebe a na-anyị n'elu 5 undelete ngwaọrụ maka Windows / Mac.
Recuva bụ ike naghachi faịlụ site na kọmputa gị, igwefoto, iPod na Flash mbanye. E wezụga ya undelete ikike, Recuva nwekwara nwere ikike ka ihichapụ ihe na-adịgide adịgide.
Ọ dị mfe iji nke a software. E nwere ihe abụọ mgbake nhọrọ: Deep iṅomi ma Quick Ọkachamara. Miri Doppler-enyere gị aka naghachi faịlụ na anọwo na-ehichapụ ọbụna otu afọ gara aga mgbe Quick Ọkachamara ga-eme ka gị na nso nso-ehichapụ faịlụ. Recuva dị mfe iji na ngwa ngwa napụta results.
Part 2 CD Iweghachite toolbox
CD Iweghachite toolbox-emekọ agbake emebi na-ehichapụ faịlụ site na gị CD na DVD. Ngwá ọrụ a dị ukwuu n'ihi na-agbake faịlụ site na kpụchara akpụcha ọ bụ mebiri emebi discs. Ugbu a, ị na-adịghị ka nchegbu banyere adịkwa ndị a faịlụ mgbe ọzọ.
Otú ọ dị, e nwere nta mwepu ka ngwá ọrụ a. Ebe ọ bụ na e mere maka naanị agbake faịlụ site na CD na DVD, ọ gaghị enwe ike iji naghachi data si a akụkụ nke disk na-merụsịrị mebiri emebi. Tupu were, software adọ aka ná ntị gị na ọ gaghị enwe ike iji naghachi niile data ọma.
Nkebi nke 3 UndeleteMyFiles Pro
UndeleteMyFiles Pro bụ nnọọ ezigbo ngwá ọrụ. Ọ bụ yiri Recuva, ha nwere ọtụtụ otu e ji mara. Otú ọ dị, otu n'ime ndị kasị uru nke ngwá ọrụ a bụ na ọ na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịchọ a kpọmkwem faịlụ.
Eziokwu a ga-adị n'elu usoro nke na-agbake a otu faịlụ. Gịnị bụ nakwa oké banyere UndeleteMyFiles Pro, bụ na ọ na-enye gị ohere ịhụchalụ ọdịnaya nke a faịlụ n'ihu na-agbake ya. Ya kasị adọrọ mmasị mma bụ na ọ na-ewe foto nke ehichapụ faịlụ, ekwe ka ị chọta ihe ndị ị chọrọ na-enweghị na-arụ ọrụ kpọmkwem site ike mbanye.
Nkebi nke 4 PhotoRec
PhotoRec bụ ngwá ọrụ dị ike maka dijitalụ foto mgbake. Ya mere, ọ na-elekwasị anya photos, ma ọ ka nwere ike naputa ụfọdụ ụdị faịlụ ndị ọzọ.
Photorec na-aga ogbu nke ehichapụ faịlụ, na-eme mbipụta na-enweghị na-agbanwe agbanwe ihe ọ bụla ọzọ na gị mbanye. Mgbe ahụ, ọmụma a napụtara gị.
Part 5 Wondershare Data Recovery
Wondershare Data Recovery Bụ otu nke kasị mma mgbake ngwaọrụ e nwere. Ọ bụ oké pụrụ ịdabere na-arụ ọrụ ngwa ngwa. Ị nwere ike ibudata a free version, ma ọ bụ zụta zuru ngwaahịa. Wondershare-Akwado ndị niile ngwaọrụ, draịva na ụdị faịlụ. Ngwá ọrụ a bụ ike na-naghachi faịlụ na e furu efu ọbụna a afọ gara aga, na faịlụ na-mebiri emebi. Ọzọkwa, Wondershare nwere ike naghachi faịlụ na na-ehichapụ site na mberede, na-ezighị ezi na ime ihe, ike disk okuku ma ọ bụ a obi kọmputa virus.
Ngwá Ọrụ Akwado Systems Akwado ụdị faịlụ Akwado Devices Speed Mgbake Ikike Pụrụ ịdabere
Recuva Windows Fọrọ nke nta ọ bụla Diski ike, iPod, Flash Drive, Igwefoto Na-adabere na omimi nke iṅomi. Nkezi Pụrụ ịdabere
CD Iweghachite toolbox Windows Fọrọ nke nta ọ bụla CD, DVD Fast Dịgasị Ọ bụghị nnọọ na Ntụziaka
N'ihi na UndeleteMyFiles Windows / Mac OS X Fọrọ nke nta ọ bụla Diski ike Fast Nkezi Pụrụ ịdabere
PhotoRec Windows / Mac OS X Na-elekwasị anya oyiyi Diski ike Fast Nkezi Pụrụ ịdabere
Wondershare Data Recovery Windows / Mac OS X / iPhone / Android All File iche Diski ike na mpụga draịva (USB mbanye, igwefoto, wdg) Nnọọ ngwa ngwa High Nnọọ Ntụziaka
Wondershare Data Recovery Bụ otu nke kasị mma mgbake ngwaọrụ e nwere. Ọ bụ oké pụrụ ịdabere na-arụ ọrụ ngwa ngwa. Ị nwere ike ibudata a free version, ma ọ bụ zụta zuru ngwaahịa. Ihe kacha mma bụ, ọ bụ nnọọ mfe iji. Ọ bụrụ na ị bụ onye na mbido, ị nwere ike naghachi data na Ọkachamara ọnọdụ. Ọzọ elu ọrụ nwere ike iji Standard ọnọdụ. Ebe a na-atọ mfe nzọụkwụ.
1. Họrọ ụdị nke faịlụ na chọrọ ebe
Ihe mbụ ị na-eme bụ ka ịhọrọ kpọmkwem faịlụ ụdị, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị maghị na ị nwere ike iṅomi niile faịlụ na kọmputa gị.
Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike họrọ a kpọmkwem ọnọdụ, ma ọ bụ nanị iṅomi gị dum na kọmputa.
2. Họrọ iṅomi Ụdị
Nzọụkwụ ọzọ bụ na-ahọrọ ụdị Doppler: Deep iṅomi ma ọ bụ Raw File Iweghachite.
3. ịhụchalụ Files na-agbapụta ha
Na na ọ bụ ya! Nanị ịhụchalụ faịlụ na họrọ onye na-e-achọ.
N'ihi na ezigbo mgbake results, ọ bụ ihe kasị mma nhọrọ ka nwere ndị na undelete ngwá ọrụ arụnyere tupu faịlụ na-ehichapụ. Ọzọkwa, mgbe ị na ihichapụ faịlụ jide n'aka na-agbali naghachi ya ozugbo, na-enweghị ịgbanyụ kọmputa gị ma ọ wụnye / nbudata ọ bụla ọzọ faịlụ. N'ihi na nsonaazụ kacha mma, nwalee Wondershare Data Recovery. Nke a dị ike undelete ngwá ọrụ ike naghachi ọ bụla faịlụ ụdị ehichapụ ọbụna a afọ gara aga.
Archive Iweghachite: Naghachi ZIP na rar Archive Files
> Resource> Naghachi> Top 5 undelete Ngwaọrụ n'ihi na Windows / Mac